Ra’iisul wasaare Kheyre iyo boqorka beelaha Mudulood oo kulan qado ah wada yeeshay (SAWIRO+DHEGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre iyo boqorka beelaha Mudulood oo kulan qado ah wada yeeshay (SAWIRO+DHEGEYSO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cusub ayaa maalintii shalay kulan qado ah shalay ugu tagay guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay Imaamka beelaha Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf.
Kulankaasi oo socday muddo saacado ah ayaa ahaa mid taageero loogu muujinayay xukuumadda cusub ee federaalka Soomaaliya, taas oo uu dhawaantaan soo dhisay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Imaamka beesha Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf oo ka hadlay kulankaasi ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku ansixiyaan xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Imaam Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in haatan xaaladda lagu jiro ee abaaraha iyo amaandarrada darteed loo baahan yahay in xukuumadda ay si deg-deg u howlgasho.
“Waxaan baarlamaanka ka codsanayaa inay mooshin iyo qashin nagu keenine ay ansixiyaan xukuumadda oo ay aqbalaan, waa dhibaateysanahay, abaaro iyo col ayaa na heysa, boqorkii dhulkaan ayaan ahay waa inay taladeeyda yeelaan” Sidaasi waxaa yiri Imaamka beesha Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf.
Ugu dambeyntii, Imaam Maxamed Yuusuf ayaa ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre u rajeeyay in sidii hore kalsoonida loogu siiyay haddana aanay dhibaato kala kulmin ansixinta xukuumadda uu dhawaan soo dhisay.
Si kastaba ha ahaatee, booqashada ra’iisul wasaare Kheyre ee guriga Imaamka beesha Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf ayaa ka dambeeyay, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu jiro kulan looga soo horjeedo xukuumadda cusub oo ay hor-boodayeen xubno ka tirsan beelaha Mudulood, inkastoo markii dambe kulankaasi uu fashilmay.